SanDisk® RescuePRO® ba'an Bixiya Faransiis | Data Recovery
SanDisk® RescuePRO® ba'an Bixiya Faransiis
Home → SanDisk® RescuePRO® ba'an Bixiya Faransiis
Si aad u soo dejisan aad version free of software ah RescuePRO®, fadlan raac tilmaamaha hoos ku qoran:
1. Fadlan dooro hoos rasiidka ku habboon la kaadhka xusuusta aad SanDisk ba'an.
>>>>trick : xusho hadba diiwaan sax ah ee, labada RescuePRO®, Deluxe waa RescuePRO®.
**** Haddii aad qabto kuuban SSD RescuePRO®, Riix halkan2. Fadlan dooro badhanka ee nidaamka qalliinka aad. button Tani waxa uu ku yaalaa hoos gadashada ee la doortay.3. Si aad u bartaan sida si ay u helaan aad code dardargelinta via tirada serial aad RPRID, booqasho LC Tech shaqeyn Guide Hab-**Note : haddii aad u wanaagsan RescuePro Deluxe uu leeyahay tiro ka mid ah serial bilaabo RPRID-0305,
fadlan la xiriir SanDisk via http://www.sandisk.com/about-sandisk/contact-us/ lambarka taxanaha saxda ah.
Tirada serial lagu daabacay on your coupon uu dhacay iyo waa sax ahayn. Waxaad markaa ku siin doonaa lambarka serial aad SanDisk RPRID-0305 dhameystiran si ay u helaan tirada serial bedelkiisa **
Si vous utilisez Windows XP, Riix halkan pour obtenir une version de RescuePRO® Standard compatible avec XP ou Riix halkan pour une version de RescuePRO® Deluxe compatible avec XP.
Fadlan gashato on computer ah. Marka ugu horaysa ee aad bilowday, Waxaa lagu weydiin doonaa in aad dhaqaajiso aad software. Waxaad heli doontaa helitaanka link a aad qaadato bogga hawlgelinta. Fadlan guji link iyo buuxi foomka, hubi inaad sheeg tirada serial si aad u hesho version free of software ah RescuePRO®.
Riix halkan for tallaabo ay hawshooda u ah hagitaan talaabo talaabo.
Haddii computer ka kaas oo aad u rakibi ma laha helitaanka Internet, waxaa suurtagal ah in codsi ku saabsan tirada ay hawshooda u dir RescuePRO® Support si ay u helaan code tababar shaqo.
Si aad nala soo xiriir, fadlan dooro hoos u dhigma nidaamka qalliinka iyo buuxi foomka xiriir, ama naga soo wac (866) 603-2195 (Tirada for US) ama (727) 449-0891. Waayo, Europe, fadlan la xiriir +44 (0)115 704 3306.